Ukuxosha, ukucasula, ukuxhaphaza Indlela yokukhuthaza ukuziphatha komphakathi kwezingane
Ingabe izingane zingama-egoist amancane?
Ukuziphatha komphakathi kwezingane kuphela kuphumelela ekuxhumana nabanye
Ukuziphatha okuhle - isifundo esibalulekile emfundweni?
Qinisekisa ukuziphatha komphakathi kwezingane kanye namakhono omphakathi - yini ebalulekile?
Amakhono ezenhlalo yikhono izingane okufanele zifunde kuqala. Akekho umuntu ozalelwa njengomuntu, ngakho ukukhulumisana nokufuna ukuziphatha okuhle kwezenhlalakahle yingxenye ebalulekile yenqubo yomphakathi kanye nenqubo yezemfundo. Ukuziphatha komphakathi kwezingane kuthonywe abazali kanye nemvelo yomphakathi yabantwana.
Ukucindezela, ukucasula, ukuxhaphaza? Indlela yokukhuthaza ukuziphatha komphakathi kwezingane
Emphakathini wethu ukubambisana kwezenhlalakahle nokwakhayo kuyadingeka. Wonke umuntu kulindeleke ukuba angathobeli imithetho kuphela kodwa futhi nemigomo nemigomo.
Ukuziphatha komphakathi kwezingane kanye namakhono omphakathi kufanele afundwe
Uma ungenjalo, unenkinga yokubhekana nabanye abantu futhi ngokushesha uba ngumuntu ongaphandle.
Ngakho-ke, kufanele kube umgomo obalulekile wezemfundo kuwe njengomzali ukufundisa ingane yakho imithetho eyisisekelo yokuxhumana komphakathi. Kamuva, uzosizwa kulo msebenzi ngezikhungo ezinjenge-kindergartens kanye nezikole.
Ekuqaleni, izinsana nezinsana zilungiswa ngokwazo kuphela. Basabela ngendlela eqhutshwayo futhi abakwazi ukusetha kabusha izidingo zabo. Kulo mongo, othisha kanye nabososayensi bezenhlalo bakhuluma nge-egocentrism enjengomntwana.
Kubantwana abancane, izwe lizungezile ngokwabo. Kodwa lokhu akuhlangene nokuzikhukhumeza: ingane encane nje ingafundile ukuqaphela izidingo zabanye nokuziphatha ngendlela efanele. Ngaphezu kwalokho, akukwazi ukukhombisa izenzo zayo kanye nemiphumela yabo. Isibonelo, ingane eneminyaka emibili kaningi ayikwazi ukuthi unecala elinye iphutha. Awukwazi ukuqonda ukuthi ubangela ubuhlungu kumlingani wakhe odlala. Unembeza ngomqondo wokuziphatha awukho kule minyaka.
Ukwenza izinto zibe zimbi nakakhulu, ukuthi ulimi alukwakhiwa ngokwanele njengendlela ebaluleke kakhulu yokuxhumana komphakathi. Imfundo, ukuthuthuka kwengqondo, ukuthuthukiswa komzwelo kanye nentuthuko yezenhlalakahle kanye nokuhlangenwe nakho ngabanye ekubhekaneni nezinye izingane kanye nabantu abadala basiza ingane yakho ukuba yandise amakhono akhe omphakathi.
Ukuhlola nokubheka ezinganeni kubonise ukuthi ukuziphatha komphakathi kudinga ukufundwa ebuntwaneni.
Ukuziphatha komphakathi kwezingane kufanele kukhutshwe
Izingane ezikhulela ekuzihlukaniseni komphakathi zithola kunzima ukukhokhela ukungabi nakho kokufunda kwezenhlalakahle kanye noxhumana nabo kamuva ekuthuthukiseni kwabo.
Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi ingane yakho ixoxisane kwasekuqaleni nezinye izingane. Isibonelo, vakashela i-playgroup noma wenze okuthile ngemindeni enobungane njalo. Umphumela wokufunda wengane yakho ukhululekile futhi unethuba lokuxhumana nabanye abazali.
I-Crèches kanye ne-kindergartens nayo yenza umnikelo obalulekile uma kuziwa ekukhuthazeni ukuziphatha komphakathi. Ingane yakho ihlangana nabantwana abaningi abahlukene lapho futhi ifunda ukubeka izidingo zabo eceleni futhi ixazulule izingxabano ngokuzikhandla. Ngakho-ke, uletha ingane yakho esikhungweni sokunakekelwa njalo futhi usize othisha ukuba baqinise ukuxhumana komphakathi ngokufakazela ukuhambisana ekhaya.
Ukuziphatha ngokweqile kanye nemikhuba emihle kwakuphakathi kwezinhloso ezibaluleke kakhulu zemfundo zezizukulwane zangaphambili. Kodwa ingabe lezi zimiso zisasebenza nanamuhla? Yebo, ukuziphatha okuhle kwezenhlalakahle zezingane kubaluleke kunanini ngaphambili.
Iqiniso liwukuthi ukuhlonipha kubonisa nokuhlonipha abanye. Ngaphezu kwalokho, wonke umuntu ufuna ukuphathwa ngendlela efanele. Ngakho-ke, ukuziphatha okuhle kuseyisihloko uma kuziwa ngamakhono omphakathi kanye nokuziphatha komphakathi.
Uma ubheka ukuziphatha okuhle, kufanele ubonise lokhu ingane yakho kusukela ekuqaleni. Ngokuziphatha kwabo, izingane zizimisela kuqala kubazali bazo. "Ukufunda ngemodeli" igama elisetshenziselwa imfundo yezemfundo.
Khuthaza ingane yakho ukuthi isebenzise imisho ehloniphekile njenge "sicela" futhi "ngiyabonga" futhi uzenze njalo njalo ngangokunokwenzeka. Kamuva, ungakwazi ukuchaza ukuthi kungani kubalulekile ukuba nenhlonipho futhi nobungane. Ngoba ngubani ongalandeli imithetho yomphakathi yomdlalo, izophawula. Ngokolunye uhlangothi, ubungane bangakwazi ukuvula izikhukhula - zombili ezisebenzayo nangasese.
Ngaphezu kwakho konke, izingane zidinga ukufunda ukuziphatha phakathi kwabo kanye nabantu abadala. Ukuze benze lokhu, kumele baqale ukufaka imithetho eminingi, njengokujwayelekile komphakathi ukuthi ukuhlukunyezwa ngokomzimba akufiswa. Izingane ezincane ngeke ziqonde incazelo nenhloso yalo mthetho kuze kube yilapho zikwazi ukuzwelana "nesisulu" sazo futhi ziqaphele ukuthi zona ngokwazo azifuni ukushaywa.
Ngiziphatha kanjani uma ingane yami iphula izinto?
Ngakho-ke, uma ingane yakho izama ukuphoqelela ithoyizi, isibonelo, njengomama noma ubaba udinga ukungenelela ngokushesha futhi ususe isimo. Tshela ingane yakho ukuthi ilinde noma ibe nelinye ithoyizi. Kamuva, kufanele ukhuthaze ingane yakho ukuba isombulule izimpikiswano ngamazwi, uthole ukuyekethisa, noma ufune usizo kubantu abadala.
Uma ubeka imithetho yokuxhumana nomphakathi, kufanele uqinisekise nokuthi banamathele kuwo. Lokhu kuyadambisa, kodwa kuyadingeka ukuze ingane yakho iqonde incazelo yayo futhi iyifake ngempela. Uma kuziwa ukulawula ukwephulwa, isibonelo, uma udlala namanye abantwana, kufanele uthathe ngokuvumelanayo. Isilinganiso kulokhu kungenzeka ukuthi ingane yakho angeke imeme abangani isikhashana.
Kubalulekile ukuthi uphinde ukhombise ukuziphatha okungekho okwenzakalayo nokuthuthukisa ukuziphatha okuhle, ukuziphatha komphakathi ngokudumisa.
Ikhasi lemibala eligxile eNqaba YePisa
Kungani sishisa ekudleni okwesipuni? umbuzo izingane
I-Geocaching nezingane | Izenzo zokuzilibazisa zokuzilibazisa